ကြက်ကြာဇံပေါင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ကြက်ကြာဇံပေါင်း
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Mar 25, 2012 in Food, Drink & Recipes | 36 comments
အခုတလောတော်တော်လေးပူလာတာကို သတိထားလိုက်မိတယ်။ နေ့ခင်းဆိုရင်လဲအပြင်ထွက်လို့ မရလောက်အောင်ကိုပူနေတော့တာပါပဲ။ အစားအစာတွေဆိုလဲ အေးတာလေးတွေ အရည်ရွှမ်းတာ လေးတွေပဲစားချင်နေပြီး ဟင်းဆိုလဲအီတာတွေမစားချင်တော့တာနဲ့ပဲ အအီလဲပြေ ကျန်းမာရေးနဲ့ လဲညီညွတ်တဲ့ ကြက်ကြာဇံပေါင်း ကိုလုပ်စားဖြစ်ရင်း ရွာထဲကိုလဲကျွေးချင်တာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ တခါတလေ ထမင်းနဲ့စားဖြစ်သလို ၀ိတ်ချချင်တဲ့အခါမှာလဲ ထမင်းလွတ်စားဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာထွင်ထားတဲ့မီနူးလေးပါ။
၁ ။ ဆန်ကြာဇံ ၂ ထုပ် ( ၃ ဦးစာ ) ( ပဲကြာဇံဖြင့်မရပါ )
( စားမည့်လူဦးရေပေါ်မူတည်ပြီး လိုသလိုတိုးနိုင်ပါသည် )
၂ ။ ကြက်သား အသားလွှာ ၂၀ သား
( ကြာဇံပေါ်မူတည်ပြီးလိုသလို အချိုးကျတိုးနိုင်ပါသည် )
၃ ။ ကြက်သွန်ဖြူကြော်
၄ ။ ကြက်သွန်ဖြူ နုတ်နုတ်စင်း
၅ ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်
၆ ။ ခနောကြက်သားမှုန့်
၇ ။ ဆား
၁ ။ ကြာဇံကို ၅ နာရီခန့်ရေစိမ်ပါ။
၂ ။ ကြက်သားကိုအရွယ်တော် အတုံးလေးများတုံးပါ။ ဇလုံထဲတွင် ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်း မှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ နုတ်နုတ်စင်း များဖြင့်နယ်ပါ။
( ကြိုက်တတ်ရင်တော့ နှမ်းဆီလေးနဲနဲထည့်နယ်ရင်ပိုမွှေးပါတယ်။ )
၃ ။ ပေါင်းမည့်အိုး ( သို့ ) ဇလုံထဲသို့ကြက်သားနယ်ပြီးသားထဲ့ပါ။
၄ ။ ကြာဇံကိုဆယ်ပြီးရေစစ်ထားပါ။ ဇလုံတလုံးထဲထည့်ပြီး ကြက်သားမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်တို့ဖြင့် နယ်ပါ။
၅ ။ ပေါင်းအိုးထဲမှ ကြက်သားပေါ်သို့နယ်ပြီးသားကြာဇံကိုတင်ပါ။
၆ ။ အောက်ကအိုးထဲတွင်ရေများများခံပြီးမီးအေးအေးဖြင့် ၃၀ မိနစ်ပေါင်းပါ။ အထက်အောက်လှန်ပြီး နောက်ထပ် ၃၀ မိနစ်ထပ်ပေါင်းပါ။
၇ ။ ကြက်သားများနူးပြီး ကြာဇံများအိသွားလျှင် အရသာရှိပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကြက်ကြာဇံပေါင်းကို ပန်းကန်ထဲပြောင်းထည့်ပြီး ဆော့ ( သို့ ) ကင်ချီဖြင့်တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါသည်။
၄ ပွဲ ၅ ပွဲလောက်ဘဲ
ရပါ့ရပါ့။ အ၀သားစား။ အပေါ်စီးကရိုက်ထားလို့နဲနေတယ်ထင်ရတာ။ ထမင်းလွတ်စားရင် ဒီတပွဲက ၂ ယောက်စားလို့ရတယ်။ အများကြီးရယ်။
သဲလေး က အခုလို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်တတ်တာ ကို ပြောပြတော့ ၊ ပေကြီး စိတ်အေးရပါဘီကွယ် ။
အမလေး သူ့ရုပ်နဲ့များ သဲလေးတဲ့
နာလို ချောနေရင်တော့ ဒုက္ခဘဲ
အမယ်အမယ် ကပေ ရှင်အခုတော့ သဲလေးတွေဘာတွေဖြစ်နေပါပေါ့လာ…. ဒီမှာဖြင့် ရှင်အရှုပ်ထုပ်ကြီး နဲ. ကဲ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ… ခိခိခိ
ပဲကြာဇံနဲ့ ဆန်ကြာဇံ မှားနေတယ်ထင်တယ် မသဲနုအေးရေ …
အမ ပြထားတာက ပဲကြာဇံလေ (ဆန်ကြာဇံ မဟုတ်ပါ) ..
ယိုးဒယားဆန်ကြာဇံပါအမ။ မြန်မာနိုင်ငံကထုပ်တဲ့ မွှေးပဲကြာဇံနဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး။ ပဲဟင်းထဲထဲ့တဲ့ကြာဇံနဲ့လုပ်ရင်သူ့လိုမစီးပဲ ဖွယ်ဖွယ်မာမာကြီးမို့စားမကောင်းပါ။ လုပ်စားဖူးသမျှ ထဲမှာ ( ကြက်ကြာဇံပေါင်း ) ဒီယိုးးယားကြာဇံနဲ့ကစားလို့အကောင်းဆုံးပါ။ တခြားတံဆိပ်တခုလဲကောင်းပေမဲ့တံဆိပ်မမှတ်မိတော့လို့။ မွှေးကထုပ်တဲ့ပဲကြာဇံနဲ့လုပ်ကြည့်တာ။ တအိမ်လုံးဘယ်သူမှမစားလို့ ပဲနီလေးနဲ့ ကြာဇံဟင်းပြန်ချက်လိုက်ရတယ်။ ပဲကဖွယ်လို့ ဆန်နဲ့ကစီးတော့စားလို့ပိုကောင်းပါတယ်။ တံဆိပ်မျုိးစုံလုပ်ပြီးမှဒီတံဆိပ်နဲ့ကျမှကောင်းလို့တင်ပေး လိုက်တာပါ။ လုပ်စားကြည့်ပါ။ အားပေးတာကျေးဇူးပါ။
ဟုတ်တယ် မဝေရေ မို ချို လည်း အဲဒါပဲ မေးမလို့။ အမသဲနုရေ ကြော်တဲ့ကြာဇံလား။ ပဲဟင်း ထဲထည့်တဲ့ကြာဇံလား။
အမမိုချိုရေ ကြော်စားတဲ့ကြာဇံပါ။ ပဲဟင်းချက်တဲ့ကြာဇံက မာပြီးစားလို့မကောင်းပါ။ ဖွယ်လဲ ဖွယ်ပြီး ထည့်ထားတဲ့အရသာတွေလဲကြာဇံထဲကိုမ၀င်ပါ။ ဒီကြာဇံကတော့ အိအိစီးစီးလေးနဲ့ အရသာအကုန်ဝင်ပါတယ်။ အိမ်မှာခဏခဏလုပ်စားသလို ဧည့်သည်ဖိတ်ကျွေးလဲ အရင်ကုန်တဲ့ဟင်းမို့လို့ ရွာထဲကလူတွေကိုလဲကျွေးတာပါ။ ဟီဟိ။
အဲဒါ ပဲကြာဇံ သေချာပါတယ်။
ဆန်ကြာဇံ ဆို အဲလိုပေါင်းလို့ မရဘူးထင်တာဘဲ။
သင်းခရု နော် သဲနု။ :-)
ဆန်မှစီးတာအရီးလတ်ရေ။ ပဲကဖွယ်လို့စားမရဘူး။ အိမ်မှာတအိုးလုံးပျက်ပြီးပြီ။ ပဲကြာဇံနဲ့ပေါင်းလိုက်မိလို့။ ဆန်နဲ့မှပေါင်းလို့ရတာ။ ဆန်နဲ့ပဲကြာဇံဘယ်လိုကွာလဲတော့မသိပေမဲ့ ကျွန်မထင်တာတော့ ကြာဇံဟင်း ( ပဲနီလေးနဲ့ချက်တာက ) ပဲကြာဇံလို့ထင်တာပဲ။ မွှေးမှာအဲ လိုရေး ထားတယ်။ အဲတာနဲ့ပေါင်းတုန်းကအိမ်မှာတယောက်မှမစားဘူး။ မာမာဖွယ်ဖွယ်ကြီး။ ဆန်ကြာဇံကကြော်စားတာ။ သူကအိသွားတာ။ ကျွန်မတော့အဲလိုမှတ်ထား တာပဲ။ အမှတ်မှား တာလားတော့မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုဟာက တော့အိမ်မှာလုပ်စားနေကြ။ အိအိစီးစီးလေး။
ပဲနဲ့ဆန်နဲ့ကအရင်ကကျွန်မလဲမကွဲပါဘူး။ အခုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှတ်ထားလိုက်တာ စီးတာဆန် ဖွယ်တာပဲ။ ပဲဟင်းချက်ရင်မွှေး။ အဲလိုပဲမှတ်ပြီး ပေါင်းတော့မယ် ကြော်တော့မယ်ဆို ဒီတံဆိပ်ပဲရှာဝယ်လိုက်တယ်။ ကုမ်ပဏီပြုတ်သွားရင်တော့ဒုတ်ခပဲနော်။
အလှူလုပ်ရင် ကျုပ်ကိုလဲဖိတ်ပါစေ လို့သာ ဆန္ဒပြုလျှက်….
ဟုတ်လုပ်ချင်ပါတယ်။ အိမ်မှာကလဲ စုစုပေါင်းမှလုပ်မဲ့လူကကိုယ်တယောက်ထဲ။
အ၀စားလို့ ကုန်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ မစားလိုက်ရပဲနေမှာပေါ့… မနောက အစားကြီးတယ်နော်။ လေးဖက်အသိဆုံး …
အဟင့် လာပြန်ပြီနောက်တမျိုး.. သူတို.တင်တိုင်းဒီကလိုက်လုပ်စားနေရတာ… အဟင့်အဟင့်..
ကိုယ်ပဲလက်စ မမှန်လို.လားတော့မသိဘူး… တစ်ခါမှာ မအောင်မြင်ဘူး… နောက်တစ်ခါဆို တင်တဲ့သူ အရင်ချက်ကျွေးပြတော့…
အခုတော့ အမှတ်မရှိ ကြက်ကြာဆံပေါင်းလေး လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်……
ဒီတခါအောင်မြင်မှာပါ။ သိပ်မခက်ပါဘူး။ စိတ်ရှည်ရတာတခုပါပဲ။ တော်တော်တော့စိတ်ရှည်ရပါ တယ်။ အောက်ခံပေါင်းရေခဏခဏဖြည့်ရတာရယ် အထက်အောက်လှန်ရတာရယ်ပဲရှိပါတယ်။
သများတို့က အစားကြီးတယ်လို့ ပြောလည်း ခံရမှာပဲ ..
ကြာဇံ နှစ်ထုပ်တည်းနဲ့တော့ နံကပ်ရုံလောက်ပဲ ရှိမယ် ..
ငါးထုပ်လောက် တော့ ဝယ်မှ အနေတော်ရယ် …
ပီး ကြာဇံကို ၅ နာရီကြီးများတောင် ရေစိမ်ရမှာဆိုတော့ …
အားကြီး စောင့်ရမှာပေါ့နော် …
ငါးနာရီအစား ငါးမိနစ်လောက်နဲ့ ရအောင် ဘီလိုလုပ်ရင် ရဦးမလဲ .. ဟင် ….
စိမ်တာနဲလေ ပေါင်းချိန်ကြာလေမို့ မီးအားချွေတာလို့ရအောင် ကြာကြာစိမ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မဆို မနက်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ညကတဲက စိမ်ထားပါတယ်။ စိမ်ချိန်နဲရင် ၂ နာရီလောက်ပေါင်း ရပါတယ်။ တချို့ကပြုတ်ပြီးမှပေါင်းလို့ အကြံပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အစိမ်းပေါင်းတာနဲ့အရသာကွာ ပါတယ်။
တိုရီးသဲ ရေ ….
ဒါဆို ကြာဇံစိမ်ဖို့ ပျင်းတော့ဘူး …
မျက်နှာတွေအများကြီးပဲဟာ။ ကြာကြာစိမ်လို့ရပါတယ်။ ပျင်းလာရင်မျက်နှာတခုပြီးတခုပြောင်းကြည့်ပေါ့။
ငြင်းတယ်လုိ့လဲ မထင်ပါနဲ့ …
ဆရာလုပ်တယ်လို့လဲ မယူဆပါနဲ့ …
မသဲနုအေး အမှတ်မှားသွားမှာစိုးလို့ပါ …
အဲဒီကြာဇံကို ပဲကြာဇံလို့ပဲ ခေါ်ပါတယ် ….
ကျေးဇူးပါအစ်မ။ ကျွန်မကတော့ စီးရင်ဆန်လို့ပဲမှတ်ထားတာမို့ဆန်ကြာဇံအောက်မေ့လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ဒီပဲကြာဇံကပေါင်းလို့ရပေမဲ့ မြန်မာပြည်က မွှေးပဲကြာဇံကပေါင်းလို့မရပါ။ ထုပ်လုပ်ပုံကွာလို့လားတော့မသိပါ။ မြန်မာပြည်ကကြော်စားတဲ့ကြာဇံနဲ့လဲပေါင်းကြည့်တာကောင်းပါတယ်။ စမ်းကြည့်ပေါ့အစ်မ။
အိမ် လိပ်စာ မေးထားရတော့မယ် နဲ့တူတယ်။ ….
ခု ဂွတ္တလစ် မှာ မနေတော့ဘူး မိဘ များသာ အဲ့မှာ နေတုန်း …
အာတူတူပါပဲ။ သို့သော် တပတ်တကြိမ်လာပါသည်။ ကြုံလျှင်တွေ့ပါမည်။
ညနေ တိုင်းရောက်ပါသည်။ ညစာ လာလာစားပါသည်။ ဟိဟိ..။ အိမ်စားရိတ် သက်သာအောင် ကြံရဖန်ရ ပါသည်။
ဟင်းချက်လိုက်လို့.. အကြည်ရောင်ဖြစ်သွားရင်.. ပဲကြာဆံလို့မှတ်..
ကျေးဇူးပါသဂျီးရေ။ မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်။ ကျွန်မအမှတ်မှားသွားတာ။ ပြောင်းမှတ်လိုက်ပါ့မယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. သူများ လုပ်ပေးတာ စားကောင်းတာဆိုရင် အကုန်စားပေးမယ်။
မသဲ အားမငယ်နဲ့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆန် ဖြစ်ဖြစ်.. အစားနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ဒီရွာက လူညီတယ်။ စားမယ် စားမယ်.. အကုန်စားမယ်..